‘लम्फू’को प्रोमोमा हिरो हावी, खै त तरकारीवाली ? « Ramailo छ
‘लम्फू’को प्रोमोमा हिरो हावी, खै त तरकारीवाली ?
फिल्म ‘लम्फू’को प्रोमो लञ्च गरिएको छ । बैशाख २८ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउने यो फिल्मको बिहिबार ट्रेलर लञ्च गरिएको हो । गोपालचन्द्र लामिछाने निर्देशित ‘लम्फू’ को प्रोमोमा तरकारीवाली उर्फ कुसुुम श्रेष्ठको भने एक झलक मात्रै छ । प्रोमो हेर्नुस् :
‘लम्फू’ को प्रोमोमा नव नायक कविर खड्का र नायक सलोन बस्नेत हाइलाइट छन् । नायिकाहरु मरिस्का मेरी पोखरेल र चाँदनी शर्माको पनि तरकारीवाली जस्तै प्रोमोमा केही झलकहरु छन् । ‘फिल्ममा यस्तो नहुन पनि सक्छ’, निर्देशक लामिछाने भन्छन्, ‘नायिकाहरुलाई अन्याय भयो भने मलाई भन्नुहोला ।’
यस्तै उनले ‘लम्फू’ राम्रो फिल्म बनेको समेत विश्वास दिलाए । ‘लम्फूले फिल्म क्षेत्रलाई अधोगतितिर लाग्दैन’, निर्देशक लामिछानेले भने । पपुलर मल्टीमिडियाको प्रस्तुती रहेको ‘लम्फू’लाई शक्तिवल्लभ घोरासैनीले निर्माण गरेका हुन् । फिल्मको कथा वरोजगार युवा पुस्ताले भोगिरहेको अवस्थामा आधारित छ ।